Fahatsiarovana USB sy microSD ho an'ny Kioxia rehetra dia mampiasa [REVIEW] | Vaovao momba ny gadget
Fahatsiarovana USB sy microSD ho an'ny fampiasan'ny Kioxia rehetra [REVIEW]
Miguel Hernandez | 12/02/2021 22:00 | General, hevitra
Ny vahaolana fitahirizana dia nitombo fatratra, indrindra raha jerentsika ny filan'ny mpampiasa sy ny fahaizan'ny rakitra haino aman-jery vaovao miaraka amin'ny famahana 4K izay malaza ankehitriny. Izany no mahatonga ilay marika fanta-daza Kioxia dia nanapa-kevitra ny hanavao ny karazana karatra microSD sy ny tehina USB.
Androany dia eo amin'ny latabatra fitsapana ny fahatsiarovana USB U365 sy ny karatra microSD Exceria 128 GB avy any Kioxia izahay. Jereo ny zava-bitany sy ny fahaizany mety indrindra amin'ny fanaovana asa fandraisam-peo, fitehirizana ary playback, ka hanatsarana ny fomba famoronanao sy fandanianao atiny.
Amin'ity tranga ity dia manomboka amin'ny fahatsiarovana USB Kioxia 128GB isika. Ny fanombohana farany ny marika dia atolotra amin'ny fahaizan'ny 32/64/128 sy 256 GB. Ny fampiasana azy io dia ny fandefasana data ary manana teknolojia USB. 3.2 Gen 1.
Size: X X 55,0 21,4 8,5 MG
lanja: Gramin'ny 9
Manana tabilao mihetsiketsika hahafahantsika mitahiry ny USB izany ary miaro ny farany hanatsara ny faharetan'ny vokatra. Araka ny efa nampoizina, manana fifanarahana amin'ny Windows 8 mandroso sy ny macOS X 10.11 isika.
Vidio Kioxia U365 amin'ny € 13,30 amin'ny Amazon
Ho tombony, ny vokatra Kioxia dia samy manana antoka maharitra dimy taona. Izy io dia vita amin'ny plastika mainty izay mifantoka mazava tsara amin'ny faharetana. Nandritra ny fitsapana nataonay dia nahazo fampisehoana manodidina ny 30 MB / s izahay tamin'ny famakiana ary manodidina ny 180 MB / s ny famakiana, zavatra ambonimbony na dia ny angona natolotry ny marika aza, izay manome antoka farafaharatsiny 150 MB / s.
Amin'izany fomba izany dia lasa vokatra mety indrindra ny famindrana ireo kopian'ny nomaniny ho solon'izay na manana tahiry ambiny faharoa amin'ny PC na Mac antsika. Nodinihinay manokana ny fampiasana ny famindrana sarimihetsika 4K HDR, ahafahanay mandefa horonantsary amin'ireo toetra ireo hatramin'ny 30 FPS farafahakeliny, noho izany dia miseho ho safidy marobe sy mahaliana izy io. Ny vidiny dia eo anelanelan'ny € 20 sy € 30 arakaraka ny vidin'ny varotra hatramin'ny 256 GB.
Izahay izao dia mitodika any amin'ny karatra microSD, indrindra amin'ny maodely 128GB amin'ilay faritra Exceria malaza izay aseho amin'ny maintso. Araka ny efa nolazainay teo aloha, manana vokatra microSDXC I an'ny Class 10 U3 (V30) izahay nifantoka indrindra tamin'ny fandraisam-peo sy playback amin'ny video amin'ny famahana ny 4K araka ny nandrasana. Noho izany, aseho ho vokatra atolotra ho an'ny finday avo lenta na fakantsary fakantsary sy fakantsary fakana sary ity.
Amin'ity tranga ity, ny famakafakana natao dia nanome valiny nitovy tamin'ireo izay nambaran'ny marika, mahatratra 85 MB / s ny soratra sy ny famakiana 100 MB / s. Tombony manokana indrindra izany raha ny fandefasana indray ny angon-drakitra azontsika ara-potoana, na ny fandraketana na ny fanaovana kopia dia samy nanatsara. Nandritra ny fitsapana nataonay dia nampiasa Dashcam izahay izay mirakitra an-tsoratra amin'ny 1080p amin'ny 60FPS ary tsy nahita olana izahay. Nanararaotra ny Xiaomi Mi Action Camera 4K ihany koa izahay ary nanatanteraka tsara ny angona natolotr'i Kioxia tao amin'ny vavahadin-tserasera momba ny famakiana sy ny fanoratana.
Mividiana karatra microSD Kioxia
Raha atambatra isika dia afaka mitahiry sary 38500 eo ho eo, 1490 minitra eo ho eo ny firaketana rehefa voavaha HD feno na 314 minitra fandraisam-peo 4K. Ho tsipiriany iray, ity karatra ity dia mifanaraka amin'ny vokatra Android rehetra, manana tsimatimanota ESD, tsy misy rano sy porofo taratra X (tsy ho tapaka io raha hadihadiana amin'ity teknolojia ity). Toy izany koa, manana fisorohana tafahoatra loatra izy io mba hialana amin'ny fahaverezan'ny angon-drakitrao noho ny hadisoana amin'ny hafanana ary mahazaka tohina.
HD feno (21 Mbps)
endri-javatra BiCS Flash izay miantoka ny faharetany amin'ny fakantsary fanaraha-maso sy dashcams izay mandrakitra mandrakitra sy mamafa ny atin'ny fitehirizana, safidy tsara hamoronana paositra fiarovana mahaleo tena.
Toy ny tamin'ny fotoana taloha, Kioxia manolotra an'ity microSD ity amin'ny fitehirizana ny 32/64/125 ary 256 GB amin'ny fitambarany, mifanentana amin'ireo fitaovana FAT32 taloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Fahatsiarovana USB sy microSD ho an'ny fampiasan'ny Kioxia rehetra [REVIEW]
Notsapainay ny Aukey's USB-C Hub, seranan-tsambo iray feno seranana 8 tonga lafatra ho an'ny MacBook M1 vaovao [REVIEW]
Ahoana ny fampidinana Photomath ho an'ny PC maimaim-poana (kinova farany)